Fahalalahàna miteny · Novambra, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Novambra, 2021
Janoary 2022 12 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Novambra, 2021
Amerika Latina 25 Novambra 2021
Journalists practice self-censorship, with propaganda channels dominating the attention.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 22 Novambra 2021
Notantarain'ny Global Voices mavitrika ny Revolisionan'ny Fahamendrehana tamin'ny taona 2013 sy 2014, nahitana ny feon'ireo olompirenena tsy hita isa azon'ny mpanoratra antsitrapo ato aminay.
Mihamaro ireo mitaky hamotsorana an'i Zhang Zhan, olon-tsotra mpampita vaovao mety ho faty any amin'ny fonjan'i Shina tanibe
Azia Atsinanana 15 Novambra 2021
Nandrisika an'i Shina nandritra ny volana maro ireo vondrona iraisam-pirenena mpiaro ny zon'olombelona mba hamotsotra ilay olon-tsotra mpanao gazety Zhang Zhan. Nanatevin-daharana ny antso ny governemanta Amerikana tamin'ny 9 Novambra satria miharatsy ny fahasalaman'i Zhang, ary mety tsy ho tafavoaka velona any am-ponja amin'ny ririnina ho avy izy.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Novambra 2021
Rustamov no olo-malaza Shiita farany nokendren'ny manampahefana tamin'ny fisamborana miharihary ireo olo-malaza Shiita ao amin'ny firenena.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 09 Novambra 2021
Ny tranokalan'ny Deutsche Welle, Current Time sy ny mpiasa sy ny mpamaky ny BelsatTV ary ny NEXTA no lasibatra farany amin'ny famoretana mitohy ataon'i Belarosia amin'ny haino aman-jery tsy miankina sy ny fahalalahana maneho hevitra.
Torkia: tatitra vaovao manasongadina ny fihitaran'ny sivana anjotra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 07 Novambra 2021
Manazava ny ny tati-baovao fa hisy "voka-dratsy mangidy sy manimba" amin'ny fahalalaham-pitenenana ao Torkia ireo andianà fanitsiana natao tamin'ny lalàna Tiorka laharana 5651.
Takian'ny Thailandey mpanao fihetsiketsehana ny anafoanana ny lalànan'ny fanivaivana mpanjaka
Azia Atsinanana 05 Novambra 2021
"Mihevitra izahay fa tsaratsara kokoa ny miaina ao amin'ny fiarahamonina tsy anagadrana olona noho ny fanehoan-keviny ara-politika, mitady fiarahamonina tsara kokoa..."
Ireo Zeorziana hafa fiseho ivelany: ‘Asain'ny namako mitafy amin'ny fomba tsy hidarohana ahy aho’
Azia Afovoany sy Kaokazy 03 Novambra 2021
Tsitsi Chkheidze na Indigo, Sandro “Manson,” ary Eka Mdzeluri, mizara ny zava-niainany sy niasany tao amin'ny fiarahamonina izay nanakianana sy nitsarana azy ireo noho ny fisehoana ivelany mahafalifaly ny fony.